လိုတဲ့အခါ သုံးပါ … ကြှနျမ လိုသုံးမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ ပေးတတျပါတယျ – Shinyoon
လိုတဲ့အခါ သုံးပါ … ကြှနျမ လိုသုံးမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ ပေးတတျပါတယျ
October 31, 2020 by Shin Yoon
ကိုယျ့ကို လိုသုံးလုပျနတောလား ဒါမှမဟုတျ တကယျ့စိတျရငျးအမှနျနဲ့ပေါငျးနတောလား မသိရလောကျအောငျထိတော့ ကြှနျမ မအသေးဘူးထငျပါတယျ ။ လိုမှ လာတဲ့သူတှကေိုလဲ သိပါတယျ
ကိုယျ့အပျေါစိတျရငျးအမှနျနဲ့ ပေါငျးတဲ့သူတှကေိုလဲ သိတယျ တမငျ ကနျးခငျြယောငျဆောငျထားလိုကျတာပါ ကိုယျ့ကွောငျ့ သူအဆငျပွသှေားမယျဆိုရငျ လိုသုံးလုပျခံရလဲ တနျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီလိုသုံးထဲမှာ အခဈြတှတေော့ မပါဘူးပေါ့။
လိုသုံးတဲ့ စကားလေးနှဈလုံးတညျးပဲ တကယျတမျး အဲ့လို လကျတှကွေုံ့တဲ့အခါ အနညျးနဲ့အမြားတော့ ခံရခကျတယျ . မလိုတဲ့အခါ မထေ့ားတတျကွပွီးမှ လိုတဲ့အခါ ပွုံးပွုံးလေးအနားကပျလာကွတာလေ ။
တခြို့ဆို လိုတုနျးခဏလေးပျေါလာတာတှရှေိတယျ ပွီးတာနဲ့ ဘယျရောကျလို့ရောကျသှားမှနျးမသိတော့အောငျ ကိုယျဖြောကျနနေိုငျစှမျးတှရှေိပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ဘကျက လူတိုငျးအပျေါစတေနာအစဈအမှနျတှပေဲ ပေးတယျ သူ့အလှညျ့တုနျးက ကူထားလို့ကိုယျ့အလှညျ့ကြ သူရှိနပေေးလိမျ့မယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှမေထားဘူး ။ ကိုယျပေးနိုငျတဲ့အရာဆို စတေနာသနျ့သနျ့လေးနဲ့ ပေးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီလိုသုံးတှအေနောကျမှာ နောကျတဈခါပွနျပွီး ယုံကွညျလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို သူတို့တှေ မသိခဲ့ကွဘူး ။ ဒီလူက ငါ့ကို လိုမှသတိရပါလားဆိုတဲ့ ဝမျးနညျးမှုတှကေို သူတို့မသိကွဘူး ။ ကိုယျပေးလိုကျလို့သူအဆငျပွသှေားတဲ့အခါ ကြှနျမ တကယျပြျောပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့သူတို့အပျေါ အရငျလို ဘယျလိုပဲ ယုံကွညျဖို့ကွိုးစား ကွိုးစား ပွနျပွီး ယုံကွညျလို့မရခဲ့ဘူး။ အနားကပျလာတာနဲ့ တဈခုခုလိုနလေို့နမှောဆိုပွီးပဲ တှေးနမေိတော့တယျ။
လိုတဲ့အခါ သုံးပါ … ကြှနျမ လိုသုံးမှနျးသိသိရဲ့နဲ့ ပေးတတျပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့တုံးအ လို့တော့မဟုတျဘူးနျော ကိုယျပေးနိုငျတဲ့ပေးပွီးလို့သူ အဆငျပွသှေားတဲ့အခါ အဆငျပွသှေားပါလားဆိုတဲ့အသိလေးတဈခုနဲ့ပဲ ကွညျနူးတတျတဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျမို့ပါ ။
ကိုယ့်ကို လိုသုံးလုပ်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် တကယ့်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ပေါင်းနေတာလား မသိရလောက်အောင်ထိတော့ ကျွန်မ မအသေးဘူးထင်ပါတယ် ။ လိုမှ လာတဲ့သူတွေကိုလဲ သိပါတယ်
ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ ပေါင်းတဲ့သူတွေကိုလဲ သိတယ် တမင် ကန်းချင်ယောင်ဆောင်ထားလိုက်တာပါ ကိုယ့်ကြောင့် သူအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင် လိုသုံးလုပ်ခံရလဲ တန်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုသုံးထဲမှာ အချစ်တွေတော့ မပါဘူးပေါ့။
လိုသုံးတဲ့ စကားလေးနှစ်လုံးတည်းပဲ တကယ်တမ်း အဲ့လို လက်တွေ့ကြုံတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ ခံရခက်တယ် . မလိုတဲ့အခါ မေ့ထားတတ်ကြပြီးမှ လိုတဲ့အခါ ပြုံးပြုံးလေးအနားကပ်လာကြတာလေ ။
တချို့ဆို လိုတုန်းခဏလေးပေါ်လာတာတွေရှိတယ် ပြီးတာနဲ့ ဘယ်ရောက်လို့ရောက်သွားမှန်းမသိတော့အောင် ကိုယ်ဖျောက်နေနိုင်စွမ်းတွေရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က လူတိုင်းအပေါ်စေတနာအစစ်အမှန်တွေပဲ ပေးတယ် သူ့အလှည့်တုန်းက ကူထားလို့ကိုယ့်အလှည့်ကျ သူရှိနေပေးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေမထားဘူး ။ ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာဆို စေတနာသန့်သန့်လေးနဲ့ ပေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုသုံးတွေအနောက်မှာ နောက်တစ်ခါပြန်ပြီး ယုံကြည်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကို သူတို့တွေ မသိခဲ့ကြဘူး ။ ဒီလူက ငါ့ကို လိုမှသတိရပါလားဆိုတဲ့ ဝမ်းနည်းမှုတွေကို သူတို့မသိကြဘူး ။ ကိုယ်ပေးလိုက်လို့သူအဆင်ပြေသွားတဲ့အခါ ကျွန်မ တကယ်ပျော်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်သူတို့အပေါ် အရင်လို ဘယ်လိုပဲ ယုံကြည်ဖို့ကြိုးစား ကြိုးစား ပြန်ပြီး ယုံကြည်လို့မရခဲ့ဘူး။ အနားကပ်လာတာနဲ့ တစ်ခုခုလိုနေလို့နေမှာဆိုပြီးပဲ တွေးနေမိတော့တယ်။
လိုတဲ့အခါ သုံးပါ … ကျွန်မ လိုသုံးမှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ပေးတတ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်တုံးအ လို့တော့မဟုတ်ဘူးနော် ကိုယ်ပေးနိုင်တဲ့ပေးပြီးလို့သူ အဆင်ပြေသွားတဲ့အခါ အဆင်ပြေသွားပါလားဆိုတဲ့အသိလေးတစ်ခုနဲ့ပဲ ကြည်နူးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်မို့ပါ ။
ကြှနျမတို့တှေ…ပွိုလဲလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ရပျနတောပါ
မမြှျောတော့ပါဘူး … တကယျ မမြှျောတော့ပါဘူး